Xiisada ka taagan Muqdisho kadib weerarkii lagu qaaday Siyaasi Cabdiraxman C/Shakuur • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xiisada ka taagan Muqdisho kadib weerarkii lagu qaaday Siyaasi Cabdiraxman C/Shakuur
Xiisada ka taagan Muqdisho kadib weerarkii lagu qaaday Siyaasi Cabdiraxman C/Shakuur
December 18, 2017 - By: Mohamed Jeenyo
Qeybo kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa saaka xirnaa kadib weerarkii ay xalay ciidamada nabadsugida ku qaadeen hoyga uu deganaa Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ah siyaasiyiinta mucaaridka ku ah xukuumada Federaalka.
Hawlgalkii ciidamada NISA ayey ku dhinteen qaar kamid ah illaalada siyaasiga oo iska caabin sameeyey kahor intaan ciidamadu la wareegin gacan ku heynta gurigaasi iyo waliba siyaasiga oo la sheegay in xabsiga la dhigay.
Dowlada ayaan horey wax digniin ah uga soo saarin xariga Siyaasigan mana jirin inta la ogyahay wax dacwad ah oo ka dhan ah ninka oo ay Dowlada horey u geysay Maxkamada, sida ay Horseed Media u sheegeen qaar kamid ah saraakiisha Booliiska majirin wax amar soo qabasho ah oo iyaga loo soo gudbiyey.
Siyaasigan ayaa muddooyinkii danbe magaalada Muqdisho ka waday kulamo doodo ah oo lagu dhaliilayey waxqabadka dowlada iyo fashilka siyaasadeed ee xukuumada Raysalwasaare Khayre.
Waa markii ugu horeysay oo ay dowlada xiligan xukunka heysa ay weerar hubeysan ku qaado siyaasi mucaarid ku ah, arrintan oo walaac weyn laga muujiyey.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa la sheegayaa inuu weerarkii xalay uu dhaawac kasoo gaaray, inkastoo aan la xaqiijin karin inta uu la eg yahay dhaawacaasi maadaama aan la ogeyn goobta hada lagu hayo.
Dowlada weli kama hadal hawlgalkii uu dhiiga ku daatay ee xalay lagu soo qabtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ahaa murashaxiintii u tartamay xilka Madaxweynaha.
Magaalada Muqdisho ayey hada ka socdaan kulamo ay yeelanayaan qaar kamid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha uu kasoo jeedo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo iyagu horey si weyn u dhaliilayey madaxda dowlada Federaalka.